लकडाउनका समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको रहस्य यो पो रहेछ ! तपाईं के भन्नुहुन्छ? - समय-समाचार
लकडाउनका समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको रहस्य यो पो रहेछ ! तपाईं के भन्नुहुन्छ?
९ बैशाख २०७७, मंगलवार ०५:२४
ओलीले अरू पार्टीका केही नेतासँग कुरा भइरहेको भन्दै पार्टीमा पनि संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत चाहिने कुराले पार्टी त्यागेर आउँछौं भन्नेहरुलाई सहज बनाइदिएको बताउनु भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा नभएको पनि बताउनु भएको छ ।
स्रोतका अनुसार ओलीले भन्नुभयो, ‘लामो छलफल जरुरी छैन भनेर ल्याइयो, ल्याउनै पर्ने थियो । अध्यादेश नल्याएको भए धेरै कुरा बिग्रिन्थ्यो ।’ हिजो साँझ साढे ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अहिले नै अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे बताउनु भएको थियो ।
ओलीले यसअघि एउटा अध्यादेश ल्याएर सहमति गर्नकै लागि फिर्ता गरिएको भए पनि पाँच–पाँच महिनासम्म पनि कुनै उपलब्धि नभएपछि फेरि अध्यादेश ल्याउनुपरेको उल्लेख गर्नुभएको हो । उहाँले लामो समय सहमति हुन्छ कि भनेर कुरिएकै भए पनि सहमति नभएको दुःखेसो गर्नुभयो ।
कोरोना कोरोना भनेर मात्रै नहुने भन्दै सरकारको नियमित काम गरिएको जवाफ दिनु भएको हो । प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि बोलेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरुमै अध्यादेश फिर्ता लिन गर्नुभएको थियो ।
दाहालले पार्टीमा कुनै छलफलै नगरी अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको भन्दै दुःखेसो पोख्नु भएको हो । पार्टी एकातिर सरकार अर्कातिरजस्तो भयो भन्ने दाहालले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।